Media sosialy: Fanadihadiana manerantany SAP (Fizarana II) | Martech Zone
Media sosialy: SAP Global Survey (Fizarana II)
Alatsinainy, Aogositra 20, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny tantara ao ambadiky ny fahalianako liana amin'ny haino aman-jery sosialy dia somary feno pitsopitsony - fitambaran'ny toerana niasako, izay nataoko mba hivelomana sy ireo olona manan-kery teo amin'ny fiainako. Sarotra tokoa, raha ny marina, ka nanoratra lahatsoratra iray manontolo aho Ny fomba nahaliana ahy tamin'ny haino aman-jery sosialy. Shel dia nametraka fanontaniana fanampiny izay manan-danja ihany, koa tiako ny hamaly an'ireo ao amin'ity fanaraha-maso ity.
2. Inona avy ireo fitaovana media sosialy ampiasainao?
Voalohany, mampiasa aho WordPress, Del.icio.us, Linkedin, Plaxo, sy Jaiku. Mampiasa ihany koa aho Facebook, MySpace, Ryze, Twitter ary Pownce. Mampiasa faritra ihany koa aho IndyMojo ary, mazava ho azy, MyColts.net.
3. Ahoana no nanovan'ny media sosialy ny orinasanao sy / na ny fiainanao?
Mahita lahatsoratra vitsivitsy aho momba ny fomba sosialy mandany ny fotoanantsika. Tery loatra ireo lahatsoratra ireo amin'ny fahitany ny tamba-jotra ary ny habetsany manome antsika fahafahana mamokatra bebe kokoa. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana no anaovana voalohany ny asa fandraharahana… Ny media sosialy dia mamela antsika hifandray amin'ny olona mora kokoa noho ny taloha.
Androany aho nitady serivisy fax lafo lavitra ho an'ny orinasako. Nikaroka aho Del.icio.us ary nahita JBlast. Manaraka izany, mitady loharanom-baovao isam-paritra aho amin'ny fandefasana telefaona finday ao amin'ny toeran'ny birao vaovaontsika - hapetrako amin'ny fanontaniana ao amin'ny LinkedIn izany. Ny azo atao dia ny maka fotoana hikarohan-tena amin'ny Internet, miantso orinasa eo an-toerana, sns. Mandany fotoana be tsy misy fifandraisana marina izahay! Tadidinao ireo andro izay tsy ahafahantsika mitady zavatra amin'ny Internet? Ataoko! Nanaintaina izany.
Raha ny fiainako dia nisy vokany tsy nampoizina izany. Nahita ny asako farany indrindra tamin'ny alàlan'ny bilaogiko sy tambajotra niaraka tamin'ireo matihanina teo an-toerana tao amin'ny Media Sosial aho, miresaka amin'ny kaonferansa isam-paritra momba ny lohahevitra aho ary manandrana mamily ny tenako amin'ny asa haharitra tokoa amin'ny tena fanampiana ireo faritra tsy mitady tombombarotra.
4. Lazao amiko ny momba ny media sosialy sy ny Indianapolis Colts. Tena tsapanao ve fa hanampy azy ireo handresy amin'ny Superbowl ny media sosialy?
Ny Indianapolis Colts no ho voalohany hilaza aminao izany Ilay lehilahy faharoa ambin'ny folo manampy handresy ny lalao rehetra. Ilay lehilahy faharoa ambin'ny folo dia manondro ny mpankafy, ilay olona eny an-tsaha misy fiatraikany lehibe indrindra amin'ny lalao. Nandeha tany amin'ny RCA Dome aho ary nahita lalao roa ary tsy mampino ny tabataba sy angovo entin'ny mpankafy amin'ny lalao iray! Saintsaino vetivety ny fiainanao ary tadidio ny fotoana ninoan'ny olona iray anao. Manome anao finiavana hahomby, sa tsy izany? Alao an-tsaina izao ny faritra iray manohana anao! Ahoana ny amin'ireo mpankafy any ankoatry ny faritra eo an-toerana?
Ny Colts dia manana olona iray tapitrisa mahery mitsidika ny tranonkalany. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mipetraka akory eto Indianapolis! Manana mpankafy any ivelany aza izy ireo izay manaraka ny lalao rehetra ary mandray anjara amin'ny tranokalany tsy an-kijanona. Nanomboka nametraka ny fanontaniana, ahoana no ahafahan'ny ekipa mifandray amin'ny mpankafy tsirairay tsara kokoa ary ahoana no ahafahan'ireo mpankafy mifandray tsara kokoa? Tambajotra sosialy no valiny. Coach Dungy dia manao bilaogy izao! Alao an-tsaina… mpanazatra NFL manana fifandraisana mivantana amin'ireo mpankafy ekipa iray.
Tahaka ireo ekipa fanatanjahan-tena matihanina rehetra, ny Colts dia mahatsapa fa tonga ny vanim-potoana lehibe. Mampalahelo fa misy ny mpankafy tonga miaraka amin'ireo vanim-potoana ireo. Ny Colts dia orinasa iray ary ekipa ary mila manao asa lehibe izy ireo mba hahazoana antoka fa mampiseho ny fankasitrahan'ny mpankafy azy ireo. Amin'ny orinasa hafa, ity dia fantatra amin'ny hoe Customer Loyalty. Ny Colts dia te-hifandray amin'ny mpankafy azy ireo ka rehefa sarotra ny fotoana dia mbola eo ihany ny mpankafy. Misaotra ny asa rehetra ataon'ny fikambanana fa ho vita izy ireo!
5. Lazao amiko ny momba ny haino aman-jery sosialy amin'ny indostrian'ny sakafo sy ny trano fisakafoanana. Ohatrinona no ampiasaina? Ahoana no fomba hampiasana azy tsara kokoa?
Ny indostrian'ny sakafo sy ny trano fisakafoanana dia indostria manana sisiny tery indrindra azonao eritreretina. Mandritra, amin'ny maha firenena antsika dia manohy misakafo matetika matetika isika, ny trano fisakafoanana dia hamboarina havia sy havanana… ary avy eo miala amin'ny asa aman-draharaha. Izay rehetra mahazatra amin'ny orinasa dia mankasitraka foana rehefa mandeha eo am-baravarana ianao ary misy miteny hoe: "Salama Doug!". Amin'ny Internet, tsy misy hafa amin'izany. Ny trano fisakafoanana manana fatratra an-tserasera matanjaka dia mahita fitomboan'ny 20% ka hatramin'ny 30% amin'ny famoahana sy ny fandefasana azy. Tsy tsara ve raha tadidin'izy ireo ny baiko farany nataonao na ny takelaka tianao indrindra na ny allergy anao amin'ny voanjo?
Manontany tena ve ianao hoe iza izany no mahandro sakafo ho anao? Azoko antoka! Nahoana araka ny eritreritrao no mahita be ireo Chef any amin'ny trano fisakafoanana lafo vidy? Ny fifandraisana ara-tsosialy amin'ilay mpiaro no zava-dehibe fa tsy ny sakafo foana. Fifandraisana ara-tsosialy ny fihinanana fa tsy fifamatorana ara-batana - ary ny trano fisakafoanana tsy hita popoka rehefa tsy manatona ireo mpiaro azy ireo amin'ny Internet. Mampalahelo fa noho ny sisin-tany dia maro ny olona tsy te hiditra amin'ity orinasa ity. Heveriko fa ny olona izay manana, na izany aza, manana vokatra tena izy ary, raha ampiasaina dia hijinja ireo tombony azo!
Ho tonga eo isika amin'ny B2C lafiny lafiny orinasa. Ireo mpitia sakafo dia efa manao ny azy manokana. Zahao hoe Resipeo rehetra, tambajotra sosialy ho an'ny olona isan'andro. Ary ny olona nandefa ary nanontany hoe maninona no tsy misy a Tambajotra sosialy fisakafoanana avy teo.
6. Toa lasa feon'ny Heartlands ho an'ny media sosialy ianao. Azonao lazaina amiko ve ny fomba fampiasan'ny olona sy ny orinasa azy amin'ny ankapobeny? Inona avy ireo fitaovana ampiasain'izy ireo?
Ny Heartland dia toerana mahavariana misy olona miasa mafy. Ny teknolojia dia jerena ho fitaovana foana fa tsy ny vahaolana eto foana. Ireo orinasam-pampandrosoana eto Indianapolis dia manamboatra fitaovana maro… ireo mpandrindra dia manangana rindranasa henjana izay hazon-damosin'ny indostria maro. Raha eo am-pitadiavana hatrany ny 'hevitra manaraka' ny lohasaha silika dia miahiahy amin'ny fampandehanan-draharahan'ny orinasa efa misy ny olona eto.
Vokatr'izany, ny Media Sosialy dia mbola eo am-piandohan'ny fahazazany. Ireo olon-dehibe dia mazàna mijery ireo fitaovana ireo toy ny kilalao. Manana namana mbola tsy hanana aho IM izaho satria izany no karazana zavatra ataon'ny zanany. Ny indostria sivika sy varotra ataontsika dia ao ambadiky ny teknolojia rehetra, na dia eo aza ny haino aman-jery sosialy. Ny anjerimanontolo eto amintsika no tsara indrindra eto amin'ny firenena saingy very ny diplaomanay amin'ny fanjakana hafa satria tsy hanokatra ny masony amin'ireo zavatra toy ny Social Media ho vahaolana ara-barotra azo antoka ny vondron'orinasa misy anay.
Hiova isika, ary misy olona sasany eto amin'ny fiarahamonina izay hitondra izany fanovana izany. Tsy azoko antoka izany ny feo, fa azoko antoka fa hanohy hanandrana aho. Tsy misy antony tokony tsy hifaninanana amin'i Seattle sy San Jose fa nomena ny sekoly mahafinaritra sy ny vidim-piainana tsy manam-paharoa eto amintsika!
7. Andao hiresaka momba ny orinasa amin'ny ankapobeny. Kely ve ny orinasa sa lehibe, mampiasa media sosialy any Midwest? Hatraiza?
Angamba ny sary tsara indrindra amin'ny fampiasana ny Teknolojia dia ny namana Roger Williams miaraka amin'ny Ivon-toerana Mpampianatra Misandratana eto Indianapolis. Nandevina ny tenany tao amin'ny Facebook i Roger mba hifandraisany amin'ireo tanora isam-paritra.
Ny Institiota Mpitarika Miseho (ELI) dia mitaona ny tanora faritra Indianapolis ho lasa mpandray anjara amin'ny fiarahamonina misy antsika amin'ny alàlan'ny programa Help Indy Online (HIO) sy Community Access Point (CAP). Mahazo eVites avy amin'i Roger aho isan-kerinandro… tsy maintsy mihazakazaka amin'ny kilometatra zato isan'ora izy. Manantena ny hanampy azy bebe kokoa amin'ny ho avy aho.
Nandefa ihany koa izaho sy Pat I Indy no safidiko!, tranonkala iray ahafahan'ny olom-pirenena sy ny mpitondra manoratra amin'ny teniny manokana momba ny antony itiavany an'i Indiana afovoany. Misokatra ny fidirana amin'ny tranokala ary tsy nanararaotana mihitsy. Mahafinaritra ireo tantara - ary tena manondro izay tena mahafinaritra momba an'i Indy izy ireo. Manantena izahay fa afaka mandany fotoana bebe kokoa amin'ny tranokala - saingy milamina ny mahita ireo olona mandefa tsindraindray. Indiana be io!
Ankoatra ny The indianapolis Colts, manomboka mahita ny lanjan'izy ireo ihany koa ny gazety amin'ny faritra. Zahao hoe IndyMoms, tranonkala mahafinaritra iray izay tantanan'ny Gazety isam-paritra izay mivelona amin'ny atiny ateraky ny mpampiasa. Maniry aho fa hahatratra ireo haino aman-jery hafa! Nahazo gazety fanoloana tena tsara eto amin'ny tanàna izahay ary toeram-pivarotana mahafinaritra roa (fampielezana sy fanontana). Mino aho fa afaka manatsara ny fidiran'izy ireo amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy.
NAOTY: Hiezaka ny hanaraka ireo fanontaniana farany aho rahampitso alina!
Tags: fanadihadiana manerantanySapfanadihadiana manerantany
21 Aogositra 2007 à 1:13
Ny lehilahy faha-12 dia ny tabataba ataon'ny vahoaka amin'ny fanamafisam-peo.
21 Aogositra 2007 à 2:48
Hoy ilay mpankafy Steeler… tena mafy be ry zalahy tamin'ny vanim-potoana roa lasa izay rehefa niditra tao amin'ny RCA Dome ianareo tamin'ny lalao mandroso!